Synology NAS RackStation RS819 4Bay (Diskless) ~ ICT.com.mm
WD Ultrastar DC HC320 Data Center Drive (8TB)K894,000
HomeNAS & RAID DrivesSynology NAS RackStation RS819 4Bay (Diskless)
WD My Cloud Home Duo Network Attached Storage (4TB)Back to NAS & RAID DrivesSynology NAS DiskStation DA1019+ 5Bay (Diskless)
Deposit Amount: 50% Waiting Time after Order: Utmost4to6Weeks အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုနှင့် အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်တို့အတွက်ဆုချီးမြှင့်ခံရသည့် Operating System ကို အသုံးပြုထားပါသည်။ RS819 သည် လုပ်ငန်းသုံး Data စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဒေတာမျှဝေခြင်း၊ ဒေတာရယူသုံးစွဲခြင်းနှင့် ဒေတာအရံထားရှိခြင်းတို့အတွက် မဖြစ်မနေအသုံးပြုသင့်သည့် Network Attached Storage ဖြစ်သည်။ File... [Learn more]
အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုနှင့် အဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်တို့အတွက်ဆုချီးမြှင့်ခံရသည့် Operating System ကို အသုံးပြုထားပါသည်။ RS819 သည် လုပ်ငန်းသုံး Data စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဒေတာမျှဝေခြင်း၊ ဒေတာရယူသုံးစွဲခြင်းနှင့် ဒေတာအရံထားရှိခြင်းတို့အတွက် မဖြစ်မနေအသုံးပြုသင့်သည့် Network Attached Storage ဖြစ်သည်။ File သိမ်းဆည်းမှုသည် Web ကိုအခြေခံထားသည့် လျင်မြန်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချရသည့် စနစ်ဖြစ်သည်။ Mac နှင့် PC ကွန်ပြူတာအမျိုးအစားနှစ်ခုလုံးဖြင့် အလွယ်တကူ ဖိုင်အသွင်းအထုတ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ အဆင့်မြင့် Search & Filter tool များပါဝင်သည့်အတွက် မိမိတို့လိုအပ်သည့် Data များကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်စေသည်။ မည်သည့် Protocols နှင့်မဆိုချိတ်ဆက်နိုင်ရန်အတွက် AFP, FTP, iSCSI, NFS, SMB နှင့် WebDAV စသည့် protocols များနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် ပြုလုပ်ပေးထားပါသည်။
CPU: Realtek RTD1296 Quad Core 1.4GHz 64-bit, Memory:2GB DDR4, External Port:2× USB 3.0, 1 × eSATA Port, Hardware Encryption Engine: Yes, Home and Student Storage, DLNA Support, Apple Time Machine Support, iTunes Server, Media Center Support, Office Applications on DSM, Lower Noise and Power Consumption than other Rackstations
File Station isaweb-based, fast and secure management tool built to allow easy, drag-and-drop operations without requiring any complex setup on Mac or PC. Advanced search and filtering tools allow for easy organization and file sharing. For complete compatibility, RS819 supports the following protocols: AFP, FTP, iSCSI, NFS, SMB, and WebDAV